Ungazisebenzisa njani ii-PC ezimbini ngomboniso omnye (iswitshi ye-HDMI), Isiphelo sendlela, kwi-intanethi 🥇
Ungazisebenzisa njani iiPC ezimbini ngomboniso omnye (iswitshi yeHDMI)
Ukuba sisebenza kakhulu kwiikhompyuter, siyalungisa, sigcina ivenkile yeekhompyuter, okanye sibhala amanqaku kumxholo webhlog yethu, kunokwenzeka ukuba sineeidesika ezimbini kunye nokubek 'esweni ukusetyenziswa kuzo zombini. Kule meko, akukhuthazwa ukuba usebenzise intambo enye ye-HDMI kwaye uyihambise kwenye ikhompyuter iye kwenye njengoko kufuneka njengoko izibuko le-HDMI lingahlali lifikeleleka ngokulula, kunye nokwenza ukuba kuphazamise kakhulu ukusebenzisa zombini iikhompyuter ngaxeshanye. Njengeengcali ezilungileyo ze-IT, sinokubheja kwenye elungileyo Isiphindaphindo se-HDMI O Utshintsho lwe-HDMI, Iyakwazi ukulawula imijelo emibini yeaudiyo / yevidiyo kwaye uyithumele ekuphela kwento esikuyo, ngokuzikhethela ukuba yeyiphi na ikhompyuter enokuthi ibeke phambili kwiscreen ngokubhekisele kwinto ekufuneka siyenzile ngalo mzuzu kanye.
Kwesi sikhokelo siza kukubonisa uzilungiselela njani iikhompyuter ezimbini zokwabelana ngesuphavayiza enye, Ngokukhetha ngononophelo iintambo ezi-3 ze-HDMI oza kuzisebenzisa kunye notshintsho oza kuzisebenzisa phakathi kweemodeli ezikhoyo kwiAmazon. Kwisahluko esizinikeleyo siza kubona indlela yokusebenzisa iitshintshi ze-USB, ukuze sikwazi ukuphambukisa izixhobo zethu zokufaka (ikhibhodi kunye nempuku) ukusuka kwikhompyuter enye iye kwenye ngendlela elula.
FUNDA OKANYE: Lawula iimonitha ezimbini kwi-PC eyandisiweyo yedesktop
Ungazisebenzisa njani iiPC ezimbini ngokubek 'esweni enye
Ukwenza imeko-bume ekwabelwana ngayo, kuyacaca ukuba kuya kufuneka sibeke iliso linye, iiPC ezimbini okanye iikhompyuter ezimbini zalo naluphi na uhlobo (nditsho nePC kunye nelaptop okanye iPC kunye neMac Mini), iintambo ezintathu ze-HDMI zobude obufanelekileyo kunye nokutshintsha. I-HDMI iyakwazi ukulawula imijelo emibini ye-HDMI ezimeleyo kwaye ivelise imveliso enye, eya kuthi ifikelele kwizibuko le-HDMI yeso sabelo. Ukuba asikathengi ikhompyutha entsha okwangoku, sicebisa ukuba ufunde onke amacebo kunye namaqhinga kwisikhokelo sethu Izinto zokwazi ngaphambi kokuthenga ikhompyuter entsha.
Khetha iintambo ezifanelekileyo ze-HDMI
Kolu hlengahlengiso siya kufuna iintambo ezintathu ze-HDMI: enye yeyekhompyuter esiza kuyichonga njenge- "PC 1", enye ikhompyuter esiya kuyibiza ngokuba "yi-PC 2" kwaye ekugqibeleni ibe yintambo ye-HDMI yokugqibela, eya kuthi idibanise ukuphuma kwe-HDMI yotshintsho olukhethiweyo ekubekweni esweni kwethu .
Ukuba sifuna ukubeka isitshixo kwidesktop, iintambo ezimbini zePC 1 kunye nePC 2 kufuneka zide ngokwaneleyo (ubuncinci i-1,8 yeemitha), Ukugubungela umgama phakathi kweePC ezimbini zemveli ezizinzileyo. Apha ngezantsi kukho uluhlu lweentambo ze-HDMI ezifanelekileyo kule njongo.
Isantya esiphezulu seHDMI Cable, iNyiloni eboshiweyo, i-1,8m (€ 6)
Intambo ye-4K uqhagamshelo lwe-2 yeemitha SUCCESO (€ 7)
ICavo HDMI 4K 2m, iiSkothkids Cavi HDMI 2.0 (€ 9)
Ukuqhagamshela iswitshi kwisohlo sinokusebenzisa intambo encinci (Imitha enye okanye ngaphantsi), ukuthatha indawo encinci kunokwenzeka edesikeni, ubeka iswitshi ngqo phantsi kweliso (okanye kwisiseko sayo). Apha ngezantsi sinokufumana uthotho lweentambo ze-HDMI ezifutshane.
IAmazonBasics -Cavo Ultra HD HDMI 2.0 0,9m (€ 6)
IBRA Cavo uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi 4K Ultra HD 1M (€ 8)
Ngokucacileyo sinenkululeko epheleleyo yoqwalaselo: sinokukhetha iintambo ezintathu ezinde, ezimbini ezifutshane kunye nenye ende okanye ezintathu ezifutshane, kuxhomekeke kwindawo kunye nobungakanani beekhompyuter zokuqhagamshela. Eyona nto ibalulekileyo yile fumana iintambo ezintathu ezilungileyo ze-HDMI ngaphambi kokuqhubeka nesikhokelo sonke. Ukuba asizazi ii-akhronimi ezihamba nentambo ye-HDMI, sicebisa ukuba ufunde uhlalutyo lwethu olunzulu Ungayikhetha njani intambo ye-HDMI efanelekileyo.
Khetha iqhosha elifanelekileyo le-HDMI
Sakuba sizibonile iintambo ze-HDMI ukuba sizisebenzise, ​​siza kwisixhobo esivumela ukuba utshintshe umthombo wevidiyo phakathi kweekhompyuter ezimbini ngokucofa iqhosha: tshintsha i-HDMI.
Esi sixhobo sincinci sikuvumela qhagamshela iintambo ezimbini ze-HDMI njengegalelo kunye nokubonelela ngemveliso enye ye-HDMI (imveliso), eya kuthunyelwa ekubekweni esweni. Ukutshintsha ukusuka kwi-PC enye ukuya kwenye, konke ekufuneka sikwenzile kukucofa Tshintsha iqhosha ikhona phezulu (ihlala ikhatshwa zii-LEDs ezimbini eziqaqambileyo ukukhawulezisa imvelaphi esebenzayo), ukutshintshela phakathi kweePC zombini ezixhumeneyo kwaye ubonise ividiyo kuphela kwikhompyuter oyifunayo ekubekweni esweni. Apha ngezantsi siqokelele ezona zilungiso zilungileyo ze-HDMI onokuzithenga kwiAmazon ngexabiso elikhuphisana ngokwenene.
I-Techole Tshintshela i-HDMI Bidirezionale (€ 9)
I-GANA Aluminium eya kumacala amabini i-HDMI Tshintsha (€ 11)
Ukutshintsha kweTechole HDMI (€ 12)
Xa sithenga enye yezi zixhobo, masiqiniseke ukuba zikhangeleka ngathi utshintsho olwenziwayo lwe-HDMI okanye baxhasa "2 igalelo-1 imveliso"Kungenjalo sibeka emngciphekweni wokuthenga isixhobo esifana neso kodwa sahluke kakhulu njengeUqhekeko lwe-HDMI, evumela ukuba iimonitha ezimbini zixhunywe kwi-PC efanayo (imeko eyahluke kakhulu apho sisisiseko sonke isikhokelo).
Ngoku ekubeni sinayo yonke into esiyifunayo ukuze sikwazi ukunxibelelana neekhompyuter zethu ezimbini ekubekeni esweni enye sinokuthi siqhubeke nokuseta kokugqibela: qhagamshela iintambo ze-HDMI kwisahlulo, ukubek'esweni kunye neekhompyuter, vula iliso, kwaye uvule enye yeekhompyuter ezimbini (okanye zombini): Iswitshi ye-HDMI iya kuvula yodwa isebenzisa ii-HDMI cable kwaye ngokucinezela iqhosha esinokukhetha kulo bukela ividiyo kwi-PC 1 okanye kwi-PC 2; ukuze yonke into idityaniswe ngakumbi sinokulandela amanyathelo esikhokelo sethu Imouse efanayo kunye nekhibhodi ukulawula iikhompyuter ezimbini okanye nangaphezulu, ukuze wabelane nge mouse kunye nebhodi yezitshixo phakathi kwezi khompyuter zimbini (enyanisweni, siya kuba nokutshintsha okubini, enye ye-HDMI kunye ne-USB enye) Isitshintshi se-HDMI sinokusetyenziselwa qhagamshela iingqungquthela ezimbini kumabonwakude Inezibuko elinye le-HDMI, ke unokuzisebenzisa zombini ngaphandle kokutshintsha iTV (iindleko ezibiza kakhulu).
Ukuba sifuna ukusebenzisa iimonitha ezimbini ecaleni kwikhompyuter enye, sisebenzisa amazibuko e-HDMI ekhadi levidiyo elizinikeleyo, sicebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu Ukudibanisa njani iimonitha ezimbini kwi-PC mi Ukucwangciswa kwescreen ezimbini Windows 10 ukusebenza kunye neemonitha ezimbini.
Ukuba iliso esinalo alinaso izibuko le-HDMI, lixesha lokuba silitshintshe libe lelokugqibela, sikhethe phakathi kweemodeli ezibonwe kwizikhokelo zethu Ezona PC zibeka esweni zokuthenga phakathi kwe-100 kunye ne-200 Euro mi Thenga i-21: 9 Ukujonga okubanzi (Iscreen seWide Wide).
Ungalubuyisela njani unxibelelwano lwenethiwekhi kwi-Mac
Akukho ziDrive Flash Drives okanye iiDrive zangaphandle eziChongiweyo- Zonke iZisombululo
Jonga imisebenzi yeWindows enembali yomsitho
Uyicwangcisa njani imisebenzi kwiWindows
Uyijonga njani iMbali yomshicileli weWindows
Khubaza ukukhawuleziswa kweekhompyuter kwiWindows ukwenzela ukwandisa ukusasazwa kwevidiyo
Lawula ukubekwa kweliso kwi-PC yakho kwi-desktop eyandisiweyo
Ungayithulisa njani i-PC
IMicrosoft .NET Isakhelo, lungisa kwaye ufake iiphoso
Lungisa iimpazamo zeWindows kwilog yomcimbi
Izikhokelo zekhompyuter ezincinci ngemizobo kunye neetafile kubo bonke abanomdla
Fumana kwaye ucime iifolda ezingenanto kwiWindows